I-China PEVA itywina lokutywina itywina elilahlayo labenzi bempahla yokukhusela kunye nabathengisi | I-H & H
Ubukhulu / mm 0.05
Ububanzi / m / 1.8CM / 2CM ngokwezifiso
Indawo yokunyibilika 59-80 ℃
Umsebenzi wobugcisa Umatshini wokucinezela ubushushu: 200-300 ℃ 14m / min
Le mveliso yeyona mveliso yethu ithengiswa kakhulu ukusukela oko ubhubhane we-COVID-19 kwihlabathi liphela ngowama-2020. Luhlobo lwe-PEVA engenamanzi eyenziwe ngezinto ezidityanisiweyo, nesetyenziselwa unyango olungena manzi kwimigangatho yeempahla ezikhuselayo. cm kunye 2cm, ubukhulu 170 micron. Xa kuthelekiswa ne-PU okanye imitya yokuncamathelisa esekwe kwilaphu, inexabiso eliphantsi kunye nomgangatho olungileyo kunye nefuthe. , Yeyona mveliso ilungileyo isetyenzisiweyo kwonyango olungena manzi lwempahla yokukhusela. Ngenxa yokunyibilika kwayo okuphantsi, iqondo lobushushu lokusebenza kwemveliso kwindawo evuthuza umoya oshushu ayizukuphakama kakhulu, ukuze ilaphu lempahla ekhuselayo lingatshiswa okanye likhubazeke, ngaphandle kwemibala. Umbala ohlaza okwesibhakabhaka, obomvu, omthubi, omhlophe uhlala ukhetha.
1. Isuitble for most PPE fabric: This product is develop for bonding normal of most PPE fabric, and it is kabanzi kubantu abaninzi abenzi iimpahla zokuzikhusela.
2. Ixabiso elifanelekileyo: Olu luhlobo olutsha lwezinto ezihlanganayo ezigcina iindleko zempahla eluhlaza kwaye zinokuzisa ubungakanani obuninzi.
3. Ukungasebenzisi ityhefu kunye nokusingqongileyo: Ayizukukhupha ivumba elibi kwaye ayinakuba nefuthe elibi kwimpilo yabasebenzi.
4. Kulula ukuqhubekeka koomatshini bomoya abashushu kunye nokugcina iindleko zabasebenzi: ukuqhubekeka komatshini womoya oshushu okuzenzekelayo, onokuhamba ngaphezulu kwe-20m / min, konga iindleko zabasebenzi.
Le yiteyiphu entsha enamathelayo yezinto ze-PEVA zokutywinwa komphetho wamanzi wempahla yokhuseleko. Ngokwesiqhelo kusetyenziswa i-2cm kunye ne-1.8cm. Nawuphi na ububanzi unokwenziwa ngokwezifiso.Sithumele le nto kumazwe amaninzi kwihlabathi liphela. Kwangelo xesha, sinamava ngakumbi nakolu shishino. Ilaphu elisebenzayo lale khasethi lilaphu le-ppe elingeluki. Ngokubanzi, izinto ezichaphazela isiphumo se-bonding bubushushu bomatshini, isantya sokusebenza, kunye nomgama phakathi kwe-tuyere kunye nelaphu, kwaye eyona nto ibaluleke kakhulu ekuthatheni isigqibo. Ngokubanzi, ukwakhiwa kwe-calcium carbonate filler kwilaphu kuya kuba nefuthe elikhulu kwimpembelelo yokubopha. Umxholo osezantsi we-calcium carbonate, ngcono isiphumo sokudibanisa, kwaye ngokuchaseneyo, imeko iba mbi ngakumbi. Ke ngoko, sicebisa ukuba abathengi basebenzise iisampulu zethu kuqala kwaye baqinisekise ukusebenza ngaphambi kokwenza iimveliso ezinkulu.Ukuba le mveliso inesitokhwe esizinzileyo sokulungela ukuthunyelwa.
Egqithileyo Iteyiphu yokutywina ubungqina bento yamanzi
Okulandelayo: Ifilimu ye-CPE yefaskoti yeCPE
Itape yokuTywina iTywina eshushu
Iteyiphu yokutywina iPeva
Iteyiphu yokuTywina iTpu